‘एक तिहाइ’मा कुरा नमिलेकाले एकतामा गतिरोध : गजुरेल – Janata Pati News Portal website, New Portal in Nepal, No 1 News Portal in nepal
Home > अन्तर्वार्ता > ‘एक तिहाइ’मा कुरा नमिलेकाले एकतामा गतिरोध : गजुरेल
वैचारिक, राजनीतिक विषयमा कुराहरु लगभग टुंगिएको स्थिति छ। अब सम्मानजनक एकता भन्नाले खासगरी संख्याहरु कसरी मिलाउने भन्ने कुरा हो। पछिल्लो समय उहाँहरु (नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल) बीच एमालेभित्र धेरै पुराना मान्छेहरु भएकाले अरु सिटहरु मोटामोटी समान समझदारी बनाएर राख्ने, केही चाहिँ पुराना साथीहरुलाई ‘एडजस्ट’ गर्नुपर्ने हुनाले व्यवस्था गर्ने भन्ने समझदारी के भयो। ८-१० सिट थप व्यवस्था गर्न सकिन्छ, पुराना साथीहरु जसलाई सम्मान गरेर राख्नुपर्नेछ, त्यो चाहिँ सकिन्छ भन्ने कुरामा उहाँहरुको सहमति हो। पछि केपी शर्मा ओलीबाट चाहिँ साथीहरुले मानेनन् भन्ने कुरा आयो।
एकता गर्ने भनेपछि भोलि अध्यक्ष प्रचण्डले पनि त आफ्नो पंक्तिलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्‍यो। आफैं मात्र जाने, आफ्नो पंक्तिलाई ‘ह्युमिलिएट’ गराएर एकता गर्नुको त के अर्थ भयो र। यसले त झन् समस्या न हुन्छ। आफ्नो पंक्तिलाई पनि तरिका मिलाएर एकतामा लाने कुरोको नेतृत्व गरेर जाँदा चाहिँ त्यो सफलता हुन्छ भन्ने भयो।
५०-५० प्रतिशत नै भन्ने कुरा होइन, अंक त यताउति हुन सक्ने भयो। तर समान हैसियत त हुनुपर्‍यो। अब उहाँहरुले हाम्रो चाहिँ दुई तिहाइ उता एक तिहाइ गरेर त त्यो एकताको के अर्थ भयो र? त्यो एकता त झन् प्रत्युत्पादक पो हुन्छ त, त्यो एकता ‘फ्रुटफुल’ हुन्छ र? मुख्य कुरा समान हैसियतमा एकता हुनुपर्‍यो। उहाँहरुले हिजो मनमोहन (मनमोहन अधिकारी) जीहरुसँग एकता हुँदा बराबरी दिएको होइन? कत्रो थियो त मनमोहनजीहरुको पार्टी त्यतिबेला? शक्तिको हिसाबले त एमाले त धेरै ठूलो भइसकेको थियो। राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावहरु जितिसकेका थिए। तर, किन गरे त भन्दा त्यो एकता गर्दा कुनै पनि पक्ष ह्युमिलिएट हुनु हुन्न भनेर नै हो। भनेको, ओलीजी पनि ह्युमिलिएट हुनु भएन, प्रचण्डजी पनि ह्युमिलिएट हुनु भएन।
यसले आशंका गर्ने ठाउँ देखियो। किन त्यसो गर्नुहुन्छ उहाँहरु? जुन कुरा जरुरी छैन। माओवादीलाई बराबर हैसियत दिँदैमा एमाले ह्युमिलिएट हुँदैन। दुइटा अध्यक्ष हुने भनिएको छ। महाधिवेशनसम्म सहमतिबाट गर्ने भनिएको छ। त्यो कुरा आउँदा चाहिँ किन गर्नु हुन्न उहाँहरु? माओवादीलाई विलय गराउने कुरो, माओवादीलाई ह्युमिलिएट गराउने कुरो त्यो राम्रो हुन्छ त? एमालेमा त एकता विरोधी पक्ष छैन नि, माओवादीसँग त एकता विरोधी पक्ष पनि छ। ‘तपाईंहरुले त्यसो गर्नु हुन्न (असमान एकता)’ भनेर उहाँहरुले नै भन्नुपर्ने हो नि, ‘अहिले बराबरी हैसियत लिनोस् पछि महाधिवेशनमा जाँदा मिलाउँला बरु, के-के गर्नुपर्छ।’ त्यो बेलामा को-कसको योग्यता, क्षमता कति भन्ने एकै ठाउँ आइसकेको हुन्छ, कुनै प्रतिशत लगाउनुपरेन।
विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगार सहायता कक्ष सञ्चालनमा
अनसन बस्दा गिरफ्तार परेका क्रान्तिकारीका नेताहरु रिहार्इ
मारवाडी समुदायको सहयोग विपन्नको योगदान भएको सभामुखको भनाई